Maamulka gobolka Nugaal oo amar ku bixiyey inay magaalada Garoowe ka baxaan Ergooyin ka socda Mudug iyo Bari. – Radio Daljir
Diseembar 24, 2012 10:29 b 0
Garoowe, Dec 24, laamaha ammaanka ee Gobolka Nugaal ayaa ammar ku siiyey inay magaalada iskaga baxaan Ergo ka kala socotey gobolada Mudug iyo Bari oo maalmihii ugu danbeeyey ku sugnaa magaalada Garooowe ee caasimada Puntland.
Qaar kamid ah saraakiisha ammaanka ee gobolka Nugaal oo Radio Daljir la hadlay ?ayaa xaqiijiyey in Ergooyinkii ku sugnaa magaalada Garoowe ay ammar ku siiyeen inay ka baxaan magaalada, iyadoo ay dawladda Puntland horey u joojisey shir ay Ergooyinkaasi ku qaban lahaayeen magaalada Garoowe.
Dhinaca kale qaar kamid Ergooyinka ayaa Radio Daljir u sheegay in aysan cidna marti uga ahayn joogitaan kooda magaalada Garoowe, iyagoona sheegay in ula jeedkoodu yahay sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen aayo ka talinta Puntland.
Mas’uuliyiin u hadlay Dawladda Puntland ayaa horey u sheegay in aan la qaban karin shir aysan Dawladdu raali ka ahay, waxana ay intaas ku dareen in shirka ay ergooyinku u yimaadeen magaalada Garoowe uu yahay mid qaldan islamrkaana ?dhinac marsan sharciga u degsan Dawladda Puntland.
Ergooyinkaan ?oo ka kala socota gobolada Mudug iyo Bari ayaa mudooyinkii ugu danbeeyey waxaa ay ku sugnaayeen magaalada Garoowe ee Caasimada Puntland iyagoo qababqaabinayey shir ay ugu magac dareen badbaadinta Puntland, kaasoo la xariira cimriga dawladda Puntland oo si wayn loogu kala arragti duwanyahay,qaar ka mid ah Ergadaasi ayaa ciidamada ammaanku xabsiga u taxaabeen 23 bisha iyagoo uu maamulku sheegay inay wadaan qorshayaal ammaanka ka dhan ah.
Cabdi Xassan Rooble Awoowe.